Xinxalaa – Maali Mallisaa? -
bilisummaa January 16, 2022	Leave a comment
Shabboo Meediya. Sabaa-himaa dhimma dantaa Oromoo irratti xiyyeefate. Waan Oromoon hundi baruu qabu, dhugaan Oromoo eessatti akka baddee, hegereen Oromoo maal fakkaatti, Oromoon Maal godhuu qaba kkf? …..
Previous Ibsa Ejjannoo Yaa’ii GHO 4ffaa.
Next SEENAA GABAABDUUNUUHOO MAHAMMAD GOOBANAA1952 – 2022Amajjii 19, 2022